Chizvarwa chinotevera chePad Mini chichava ne mini-LED skrini | IPhone nhau
Isu tanga tichitaura nezverunyerekupfu kweanopfuura gore izvo zvinongedzera kugadziriswazve kwakazara kweiyo Mini Mini, yechinyakare dhizaini asi ichiri kupa tsigiro yeApple Penzura mune yake yechishanu chizvarwa iyo parizvino iri kutengeswa.
Kana isu tikasateedzera runyerekupe, iyo nyowani iPad Mini inogona kuwedzera saizi yechidzitiro kubva parizvino 7 inches kusvika 8,5 kana pamwe 9 inches, ichideredza iwo bezels kuchengetedza saizi. Iyo yeTouch ID yaizoenda kudivi senge iyo iPad Mhepo uye inotora a USB-C kubatanidza.
Asi zvakare, kana tikateerera Digitimes, yakakosha ruzivo rwechizvarwa ichi chechitanhatu cheiyo Mini Mini ichave skrini, skrini iyo vachatora Mini-akatungamirira michina.
Zvinoenderana nesvikiro iri, mugadziri BLU Anopenya achatanga kutumira mini-LED skrini mukota yechitatu ya2021, masikirini anozogadzirirwa kwete chete yechizvarwa chinotevera cheiyo Mini Mini, asiwo iyo inotevera MacBook PRo iyo Apple yaizo vakaronga kutanga pamusika mu kota yekupedzisira yegore rino.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti skrini ne mini-LED tekinoroji inopa a kupenya kwepamusoro, musiyano uri nani uye vatema vakadzika, vatema vasingape iwo hwakaenzana iwo pani yeOLED.
Mark Gurman akambotaura kuti iyo nyowani iPad mini ichaziviswa kupera kwegore rino uye iyo mini-LED inoratidzira inoenderana nechinhu chakatumirwa ichatanga mumwedzi mitatu yechitatu yegore nekudaro ichisimbisa ruzivo kubva kuDhijitari.
Kubva pa9to5Mac, vachangobva kutaura kuti inotevera iPad mini ichaisa iyo Chip imwechete cheA15 sechizvarwa chinotevera iPhone 13, inosanganisira a Smart Connector kubatanidza nyore nyore inoenderana keyboard. Nezve izvi zvigadziriso zvinoita kuti Apple inowedzera iyo huwandu hwevatauri zvechigadzirwa ichi, sezvakataurwa naJon Prosser.
Chiri pachena ndechekuti eMutengo wemuenzaniso uyu hauzove wakafanana kupfuura iyo iPad Mini 5, chishandiso chinopfuura saizi yacho inodhura kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Chizvarwa chinotevera iPad Mini ichaita mini-LED kuratidza
Iyo AirPods 3 yaizosvika neiyo nyowani iPhone munaGunyana
Apple inoderedza huwandu hwePhones uye iPads inotsigira Apple Music spatial odhiyo